Ruushka oo ku Celiyay Digniintiisa ku aadan Sweden iyo Finland ee ku biirista NATO
HomeWararka CaalamkaRuushka oo ku Celiyay Digniintiisa ku aadan Sweden iyo Finland ee ku biirista NATO
April 21, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Finland, Wararka Maanta, Wararka Sweden 0
Ruushku wuxuu ka digay, maanta mar kale cawaaqibka ka iman kara Finland iyo Sweden ku biirista Ururka NATO ee Waqooyiga Atlantic.
“Ruushka waxa uu digniino kala duwan u diray dalalka Sweden iyo Finland oo ku saabsan cawaaqibka ka dhalan kara ku biiritaankooda NATO,” ayay tiri Maria Zakharova oo u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka.
Si walba waa nalooga digay, hadday tahay mid guud ama mid (isgaarsiin) oo labada dhinac ah. Way garanayaan, markaa wax la yaab leh ma jiraan. Wax walba waa lagu wargeliyay
Horaantii, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka waxay uga digtay Finland iyo Sweden cawaaqibka ka dhalan kara ku biiritaanka Ururka NATO ee Waqooyiga Atlanta ee xiriirka laba geesoodka ah iyo nidaamka amniga.
“Sweden iyo Finland waa inay fahmaan cawaaqibka ka dhalan kara ku biiritaanka NATO ee xiriirka laba geesoodka ah iyo nidaamka amniga,” Zakharova ayaa ku tiri hadal ay soo saartay, iyadoo xustay in ku biiritaanka Sweden iyo Finland aysan u badneyn inay gacan ka geystaan ​​xoojinta maqaamkooda caalamiga ah.
Zakharova waxay tixgelisay in “ku biiritaanka suurtagalka ah ee Sweden iyo Finland ee NATO ay halis gelinayso cawaaqib xumada xasilloonida gobolka waqooyiga Yurub.”
14-kii Abriil, guddoomiye ku xigeenka golaha ammaanka ee Ruushka Dmitry Medvedev ayaa sheegay in Ruushka uu xoojin doono xuduudihiisa galbeedka haddii Sweden iyo Finland ay ku biiraan NATO.
“Haddii Sweden iyo Finland ay ku biiraan NATO, dhererka xuduudaha dhulka ee isbahaysiga ee Ruushka ayaa ka badan labanlaaban, dabcan, waa inaan ilaalinaa xuduudaheena,” ayuu raaciyay.
“Kiiskan, kama hadli doono xaaladda aan niyuukleerka ahayn ee badda Baltic, sababtoo ah waa in la soo celiyaa dheelitirka,” ayuu raaciyay.